Mpandeha efatra no miady amin’ny fahafatesana hatramin’ny fotoana nanoratana omaly. 13 ireo naratra vokatr’izany.
« Nisy fiara Mercedes Sprinter roa samy naka olona teo amin’ny fijanonan’ny taksibe teo Fenoarivo. Nisy fiara Mercedes 307 iray hafa nanoy ny diany fa tsy nijanona. Samy fiara mpitatitra avokoa ireo telo ireo. Nahita ilay fiara tsy nijanona ireo fiara roa naka olona dia samy nirifatra nanenjika. Tokony ho tamin’ny telo ora maraina no nitrangan’izany », hoy ny fitantaran’ireo mpandeha tao amin’ny iray tamin’ireo fiara nifanenjika.
Rehefa tonga teo Ambodiafotsy dia nisongona ilay fiara Mercedes 307 ny iray tammin’ireo Mercedes Sprinter ka afaka. Handeha hisondrotra kosa ilay faharoa no nivarina tany an-kady. « Mpanampy ny mpamily teo aloha no nitondra ity fiara nitra-doza ity. Vao haingana izy no nahazo fahazoan-dalana mitondra fiara », hoy ny mpitandro ny filaminana. Nitsoaka io mpamily namoa-doza io ary mbola karohina hatramin’izao.
Tsy sambany no tra-doza tahaka izao ire zotrra mapitohy an’Alakamisy-Fenoarivo.
"Mandeha mafy loatra ny ankamoan’ireo taksibe miasa amin’iny lalana iny", hoy ihany ireo mpandeha. Vao tsy ela akory izay no nisy zandary iray nitondra ironony bemoto be irony tra-doza ihany koa teny Alakamisy noho ny sy fitandreman’ireo fiara mpitatitra. Efa niady tamin’ny fahafatesana mihitsy ity zandary ity fa avotra soa aman-tsara ihany.